सडकमा भिख माग्ने देखि न्यायाधीशको कुर्शीसम्मको यात्रा : भारतमै तेस्रोलिंगी न्यायाधीश
काठमाडौं (पहिचान) असार ३१ -सडकमा भिख माग्दै गरेको व्यक्ति न्यायाधीस बनेर इजलासमा बस्छ भनेर तपाईले विश्वास गर्नुभएको छ ? छैन होला । किन भने धेरैको दिमागमा त्यस्तो सम्भव हुँदैन भन्ने नै आउँछ । तर असंम्भव भन्ने कुरा यो संसारमा के नैं छ र ? यो सम्भव भएको छ । त्यो पनि भारत जस्तो समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई संबैधानिक अधिकार समेत निदएको देशमा ।
८ जुलाईलाई भारतीय एलजीवीटीआइ समुदायले उत्साहपूर्वक सम्झन्छन् किनकी यही दिन भारतको दिनाजपुर जिल्लाको इस्लामपुरको लोक अदालतमा तेस्रोलिंगी न्यायाधिस नियुक्ति भएको थियो ।
८ जुलाई २०११ जोइता मण्डल पश्चिम बङ्गाल राज्यको उत्तरी दिनाजपुर जिल्लाको इस्लामपुर लोक अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भइन् । भारतको इतिहासमा जोयता मण्डल पहिलो ट्रान्सजेण्डर न्यायाधीश हुन् ।
सन २०१० तिरको कुरा हो जोयता BPO मा नोकरी गर्थिन । त्यहाँ उनको एतिसम्म मजाक उडाउने गरिन्थ्यो कि उनले दुई महिनामा नै जागरिबाट हात धुनुपेको थियो । यस्तो जटिल परिस्थितिमा उनले जागिर छोड्नुपर्यो कि उनले जिन्दगिमा भिखसम्म माग्नु पर्यो ।
जोयता मंडल आज जुन अदालतमा न्यायाधीश छन, त्यहाँबाट पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको बस स्टेसनमा उनले कैयौरात गुजारेकी छन् ।
उनले किन सडकमा सुत्नुपर्यो ? किन भने हिजडा भनेर उनलाई धर्मशालाहरुले समेत आश्रय दिएन् । जीवनदेखि हार खान नजानेकी जोयताले रोडमा बसेर भिख मागिरहिनन् किन भने जोइतालाई थाहा थियो कि उनलाई आफू र आफ्नो समुदायका लागि लड्नु छ ।
‘मलाई शारिरिक वा यौनिक हिसावले दुःख दिइएको थिएन, तर दुनिया मेरोबारे कुरा काट्थे, मलाई घुरेर हेर्थे अनि मेरो मजाक उडाउँथे,’ जोयता आफ्नो खराव विगतबारे भन्छिन, ’परिस्थिति एति खराब थियो कि म उहाँ काम गरेर डिप्रेस भइसकेकी थिए र मैले नोकरी छोड्ने फैसाल लिएकी थिए ।’
आफै पिडामा गुज्रिएकी जोयताले २०११ देखि नै अफ्नो समुदायका लागि काम शुरु गरिन् । सिलीगुड़ीमा उनले एउटा संस्था चलाइन जसको नाम ‘मंशा बङ्गला’ हो ।
जोइताले समाजसेवाको शुरुवात ‘मंशा बंगला’ बाट नैं गरेकी हुन् । त्यसपछि उनले दिनाजपुर नोतुन आलो सोसाइटी दिनास खोलीन् । यो सोसाइटीले LGBTQ का लागि काम गर्छ ।
दिनासमा जेण्डर डिफरेन्स देखाइदैन । कोइ पनि यहाँ रहन सक्छन् । मानिसले आफ्नो जिन्दगी थप आरामदायी बनाउन भनेर नै त्यहाँको स्रोत परिचालन हुन्छ ।
यो सोसाइटी दिनाजपुरका हरेक सरकारी संस्थासँग सहकार्यमा छ । यो सोसाइटीको ९३ समुहको सपोर्ट पाइहेको छ, जो हिजड़ा, ट्रांसजेण्डर र समलिंगीकों मुद्दामा काम गर्छन् ।
जोइताले LGBTQ कम्युनिटीका लागि त धेरैकाम गरेकी छन् नै उनले बृद्धबृद्धाका लागि एक बृद्धआश्रम समेत खोलेकी छन् । यौनकर्ममा लागेर सुध्रन चाहने मानिसहरुका लागि पनि उनले धेरै काम गरेकी छन् ।
कलकतामा जन्मिएकी जोइताको नाम पहिले जयन्त मण्डल थियो । जोयताले ग्राजुएशन दोस्रो वर्षसम्म पढेर न्यायाधिस नियुक्त भएपछि थप पढाइ अघि बढाएकी हुन् ।
संघीय युवा संसदबाट रुक्शानाको प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न : युवा परिषदमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्दै हुुनुहुन्छ ?
समलिंगी तेस्रोलिंगीको विषयमा चलचित्र बनाउँदै केसी
‘इमोशनल ब्लाकमेल’ नगर्न रेशुलाई चेतावनी, फेरी पनि मिति सारे चुप नबस्ने
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धा संसदमा उठाउने निरुपालको प्रतिवद्धता
देविकालाई तेस्रोलिंगीबारे गीत गाउने रहर
किन नागरिकतामा नाम परिवर्तन गर्न नहुने ?
मिस वल्र्डको मञ्चमा तेस्रोलिंगी एन्जेला पोन्स सहभागी हुने पक्का
पहिचान डटकमका लागि, प्रकाशक संस्था : पहिचान मिडिया प्रा. लि. बागबजार, काठमाडौं
कार्यालयः काठमाडौं नेपाल
सञ्चालकः भवानी घिमिरे